Global Voices teny Malagasy » Afrika Atsimo : Fotoana Handihizana Diski Izao · Global Voices teny Malagasy » Print
Afrika Atsimo : Fotoana Handihizana Diski Izao
Voadika ny 29 Jona 2017 9:28 GMT 1	 · Mpanoratra Prisha Bhoola Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Afrika Atsimo, Fanatanjahantena, Mediam-bahoaka
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2010)
Maro ireo tenifototra, famantarana sy singa-marika ofisialy izay mamaritra ireo hetsika ara-panatanjahantena maneran-tany. Tsy misy hafa amin'izany ny Fiadiana Ny Ho Tompondaka Erantany FIFA 2010 any Afrika Atsimo amin'ity taona ity. Ananantsika ny singa-marika ofisialin'ny FIFA , ny endrika famantarana ofisialy ny FIFA  (Zakumi), ireo famantarana voapetaka ofisialin'ny FIFA, ary amin'izao fotoana izao – ananantsika ny dihy ofisialy!
Tsy vitan'ny hoe voalohany amin'ny Fiadiana Ny Ho Tompondaka Erantany hampiantranoan'ny kaontinanta Afrikana ny amin'ity taona ity fa Fiadiana Ny Ho Tompondaka Erantany voalohany ihany koa manana dihy ofisialy nalaina avy amin'ireo fihetsika eo ambony kianja filalaovana baolina kitra manerana an'i Afrika Atsimo.
Manazava ny Diski toy izao ny Dispatch 24/7 :
Mifototra amin'ny fomba tokana filalaovan'ireo Afrikana Tatsimo ny baolina kitra ilay dihy, ”manaraka gadona, somary tia sehoseho kely, fa tsy mankaleo mihitsy” araka ny lazain'ireo mpahalala.
Mandeha lavidavitra kokoa ny Goal.com :
Teninjatovo fampiasan'ireo kaominina ao Afrika Atsimo enti-milaza ny lalao baolina kitra ny Diski, ary rindrandihy izay mitaratra tsara ny fitiavan'ny firenena io fanatanjahantena io izany dihy izany. Mifototra amin'ilay antsoin'i Wendy Ramokgadi, mpamorona ny Dihy Diski, ho ‘fomba manokana filalao baolina kitra aty amin'ny tanànanay’ io dihy io.
”Ny hevitra lehibe niaingan'izany dia ny tsy maintsy hamoahanay zavatra tena Afrikana Tatsimo tanteraka. Manaraka gadona ny baolina kitran'ny firenenay ary noho izany, mitovy amin'ireo fihetsika atao eo ambony kianjan'ny baolina kitra Afrikana Tatsimo avokoa ireo fihetsika rehetra ampiasainay ao anatin'ilay dihy, fihetsika izay tsy hitanao afa-tsy aty amin'ny firenenay irery ihany,” hoy i Ramokgadi.
”Iray amin'ireo zavatra tena mampirehareha ahy ny Dihy Diski, tena ankafiziko izy io. Rehefa tonga aty amin'ny firenenay ireo olona ireo, avelao izy ho tonga ary hahatsapa ny gadon'i Afrika.”
Nandray anjara tamin'ilay hetsika ihany koa ny Filoha Afrikana Tatsimo, Jacob Zuma, araka ny tatitry ny 2010gifts.com :
Nampivanitika izay tsy izy ny vahoaka ny Filoha Jacob Zuma raha nanandrana nianatra ny dihy Diski.
Toa hita fa misintona ny sain'ny olona manerana ireo morontsirak'i Afrika Atsimo ihany koa ny Diksi. Toa efa mahafehy tsara ireo famindra amin'ny Diski i Matt Harding, nalaza noho ny lahatsariny Where in the World is Matt (Aiza Eto An-tany no misy an'i Matt).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/06/29/102114/
 ny endrika famantarana ofisialy ny FIFA: http://www.fifa.com/worldcup/organisation/mascot/index.html